MB 2015 Sebtember, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Ilaa aan la kulanno mugdi, inteena badan waxaan si fudud ugu qaadanaa wax fudud. Si kastaba ha noqotee, ma jiraan wax la arko oo aan iftiin lahayn. Waxaan aragnaa wax uun markii iftiinka uu qol u socdo. Meesha ay waxani gaaraan indhahayaga, waxay kicisaa dareemayaasha indhaha waxayna soo saartaa seenyaale u oggolaanaya maskaxdeena in loo aqoonsado shay meel bannaan oo leh muuqaal gaar ah, goob iyo dhaqdhaqaaq. Fahamka dabeecadda iftiinka waxay ahayd caqabad. Aragtiyadii hore ayaa si aan macquul ahayn u qaatay iftiin sidii qurubyo ah, ka dibna sidii hirar. Maanta dhakhaatiirta jimicsiga badankood waxay u fahmaan iftiinka sida walxaha wareega. Fiiro u yeelo waxa Einstein qoray: Waxay umuuqataa in mararka qaar ay tahay inaan isticmaalno mid iyo mararka qaar aragtida kale, halka aan labada jeer adeegsan karno. Waxaan wajahaynaa nooc cusub oo faham la’aan ah. Waxaan haynaa labo sawir oo is khilaafsan oo xaqiiqada ah. Shakhsi ahaan, midkoodna si buuxda uma sharixi karo muuqaalka iftiinka, laakiin waa la wada sameeyaa.
Arrin xiiso leh oo ku saabsan dabeecadda iftiinka ayaa ah sababta mugdigu uusan awood u lahayn. Waxaa taa ka duwan, in kasta oo nalka kaxeeyo mugdiga, ma ahan. Ifafaalehan ayaa ka dhex muuqda Qorniinka, oo ku saabsan nooca Ilaah (Iftiinka) iyo midka xun (mugdi ama mugdi), door muuqda. U fiirso waxa uu rasuul Yooxanaa ku sheegay 1 Yooxanaa 1,5: 7 (HFA) wuxuu qoray: Tani waa fariin aan ka maqalnay Masiixa oo aan kuu sheegaynaa: Ilaah waa iftiin. Gudcur kuma jiro isaga. Markaa haddii aan sheeganno in aan ka tirsan nahay Ilaah oo aan ku sii jirno gudcurka dembiga, ka dib been baan u sheegnaa oo aan noloshayada uga hor imaannaa runta. Laakiin haddii aan ku nool nahay iftiinka Ilaah, waxaan sidoo kale ku xiran nahay midba midka kale. Oo dhiiggii uu wiilkiisii ​​Ciise Masiix noo daadiyay wuxuu inaga furaa dambi oo dhan.
Sida Thomas F. Torrance wuxuu ku qoray buugiisa 'Trinitarian Faith' (Caqiidnimada), hogaamiyihii kaniisaddii hore Athanasius, isagoo raacaya waxbarista John iyo Urapostles kale, waxay adeegsadeen tusaalaha iftiinka iyo shucaaca si ay uga hadlaan dabeecadda Eebbe sida uu noogu muujiyey Ciise Masiix: sida iftiinka waligiis la’aantiis la’aantiis, aabuhu waligiis wiilkiisa ma lahan amase eraygiisa la'aan. Intaas waxaa sii dheer, sida iftiinka iyo iftiinka ay isku mid u yihiin oo aan shisheeye u ahayn mid isku midka ah, aabbaha iyo wiilkuna waa isku mid oo ma aha shisheeye midba midka kale, laakiin waa isku mid iyo isku dabeecad. Sida uu Ilaah yahay nuurka weligiis ah, sidaas oo kale ayuu Wiilka Eebbe yahay iftiinka weligiis ah ee isagu isagu ku jiro iftiinka weligiis ah, oo aan bilow iyo dhammaad lahayn (Bogga 121).
Athanasius waxay dejisay qodob muhiim ah oo isaga iyo mas'uuliyiinta kale ee kaniisadda si sax ah loogu soo bandhigo Xukunka Nicene: Ciise Masiix wuxuu la wadaagayaa hal Aabbaha (Giriig = ousia) Ilaah. Hadeysan sidan aheyn, wax macno ah ma laheyn markii Ciise ku dhawaaqay: "Kii i arkaana wuxuu arkay aabaha" (Yooxanaa 14,9). Sida Torrance xustay haddii Ciise muhiimad ahaan la mid yahay (hal ousia) oo leh aabaha (iyo sidaas oo dhan Ilaah), kuma haysan lahayn muujinta buuxda ee Ilaah xagga Ciise. Laakiin markii Ciise ku dhawaaqay inuu runtii yahay waxyigaan waxaa loola jeedaa in la arko isaga, oo la arko aabaha, in la maqlo isaga micnaheedu waa inuu maqlo aabihii sida uu yahay. Ciise Masiix waa Wiilka Aabbaha dabiicadiisa, taas oo ah, runtiisa dhabta ah iyo dabeecadiisa. Torrance waxay faallooyinka ka bixisaa "Caqiidnimada Saddex-Diidnimada" ee bogga 119: Xiriirka aabaha iyo wiilka wuxuu si fiican ugu dhacaa si buuxda oo midba midka kale ka mid ahaadaa isagoo Ilaah ah, kaasoo weligiis jira isla mar ahaantaana u leh aabaha iyo wiilka. Ilaah waa aabbe sida uu isagu weligiis u yahay aabbaha wiilka iyo sida wiilku u yahay Ilaah oo ah sida uu isagu weligiis yahay wiilka aabbaha. Waxaa jira sirta ku qumman oo weligeed dhaxeysa aabaha iyo wiilka, iyadoon jirin "fogaan" ahaanshaha, waqtiga ama aqoonta dhexdooda.
Maadaama aabaha iyo wiilku ay yihiin hal aasaasi ah, iyaguna sidoo kale waa isku mid wax qabashada (Ficil). Beachten Sie, was Torrance dazu in der Christlichen Lehre von Gott schrieb: Zwischen dem Sohn und dem Vater besteht eine ununterbrochene Beziehung von Sein und Handeln, und in Jesus Christus wurde diese Beziehung ein für alle Mal in unserem menschlichen Dasein verkörpert. So gibt es also keinen Gott hinter dem Rücken von Jesus Christus, sondern nur diesen Gott, dessen Gesicht wir in dem Gesicht des Herrn Jesus sehen. Es gibt keinen dunklen unergründlichen Gott, keine beliebige Gottheit, von der wir nichts wissen, aber vor der wir nur zittern können, während unser schuldbeladenes Gewissen harte Streifen auf seine Würde malt.
Fahamka dabeecadda ayaa noo muujiyay Ciise Masiix (Maqaalka) Eebbe, wuxuu door muhiim ah ka ciyaaray geedi socodka si rasmi ah loo go'aamiyey canabka Axdiga Cusub. Buug looma tixgelin doono ku darista Axdiga Cusub haddii aysan sii wadin midnimada aabaha iyo wiilka. Marka runta iyo xaqiiqadan waxay u adeegtay sidii tarjumaan muhiim ah (ie hermeneutic) runta aasaasiga ah taas oo nuxurka Axdiga Cusub lagu go'aamiyay kaniisadda. Fahamka in aabaha iyo wiilka (oo ay kujirto maskaxdu) waa isku mid dabeecadda iyo ficil ahaan, waxay naga caawisaa inaan fahamno nooca nimcada. Nimcadu ma aha shey uu abuuray ilaahay oo u dhexeeya Ilaah iyo dadka, laakiin, sida Torrance u sharraxay, “waa nimcadiisa Eebbe inagu siiyay Wiilkiisa dabiiciga ah, oo hadiyadda iyo deeqbiyuhu si isku mid ah u yihiin Ilaah.” Weynaanta nimcada badbaadada Eebbe waa shaqsi, Ciise Masiix, maxaa yeelay gudaha, xaggiisa ayaa laga yimaadaa badbaadada.
Ilaaha Saddexanka ah, Nuurka daa'imka ah, ayaa ah isha "iftiinka" oo dhan, jidh ahaan iyo ruux ahaanba. Aabbihii iftiinka u yeedhay wuxuu u diray wiilkiisii ​​si uu u noqdo nuurka dunida, oo aabuhu iyo wiilku waxay soo diraan ruuxa si ay u umadaan iftiinka dadka oo dhan. In kasta oo Ilaah «ku nool yahay nal aan la gaari karin» (1 Timoteyos 6,16), Isaga ayaa naftiisa noogu muujiyay naftiisa, wejigiisa "wejiga" wiilkiisa jidhkiisa ah, Ciise Masiix (eeg 2 Korintos 4,6). Xitaa haddii aan marka hore u fiirsaneyno si aan u "eegno" iftiinka xad-dhaafka ah, kuwa ku gala meeshaas waxay garowsan doonaan dhowaan in gudcurka loo kala firdhiyey meel aad iyo aad u ballaaran.
Nooca iftiinka, Eebbe iyo nimcada